Apple Watch: Falanqaynta iyo Falanqaynta Muuqaalka | Wararka IPhone
Pablo Ortega | | Apple Watch, Alaabada Apple
Saacadda Apple waxay durbaba ku jirtaa gacmaheena waxaanan fursad u helnay inaan ku tijaabinno, si dhammaystiran, maalmo kooban. Kiiskeena waxaan awoodnay inaan helno a Isboortiga kudhaca cirifka cirifka iyo shaashadda 38mm. Falanqeyntan iyo dib u eegista fiidiyaha ee Apple Watch ee Isbaanishka waxaan ku tusineynaa sanduuqa, qalabka lagu daro, qaabeyntiisa, howlaheeda, hagitaankeeda iyo sida ay u barbar dhigeyso tartanka.
2 Iskuday sanduuqa Apple Watch
5 Jimicsi jimicsi
7 Ma mudan tahay in la iibsado Apple Watch?
Iskuday sanduuqa Apple Watch
Marka laga hadlayo daabacaadda Sport ee Apple smartwatch, qalabka waxaa lagu xiraa sanduuqa dheereeya. Sharaxaadda sheyga waxaan arki karnaa inay la socoto xarig dheeri ah oo ku jira xirmada, laakiin dhab ahaantii waa jijin dheeri ah oo dheeri ah oo aan ku beddelan karno midka ku yimaada saacadda caadiga ah, taas oo ah cabirrada ". Kala beddelashada suumanka saacadaha ayaa ah mid aad u fudud oo qasab ku noqon doonta dhammaan kuwa doonaya inay ku xirtaan Apple Watch gacanta midig, sida kiiskeenna.
Markaad daarto saacadda, oo aad sugto wax ka yar daqiiqad, waxaad awoodi doontaa inaad doorato luqadda, curcurka aad ku xiran doontid saacadda casriga ah iyo jahaynta taajkii. Mid ka mid ah talaabooyinka ugu dambeeya ee qaabeynta waxaad awoodi doontaa inaad doorato haddii aad rabto inaad kala soo baxdo dhammaan codsiyada aad ku haysato iPhone-kaaga oo la jaan qaadaya smartwatch saacadda. Taladayada ayaa ah inaad aqbasho tillaabadan, inkasta oo aad had iyo jeer gadaal ka kicin karto.
Dhamaadka cirridka cirifka ayaa u muuqda mid ka fiican shaqsi ahaan marka loo eego sawirrada. Qaybta aluminium ee saacadda ee cawl leh suunka madow waxay bixisaa a muuqaal xarrago leh. Cabirka shaashadan, 38mm, wuxuu si fiican ugu habboon yahay curcurka khafiifka ah, in kasta oo shaashadda 42mm ay ka sii muuqaal badan tahay (in kasta oo boodhku yar yahay, haddana farqigu wuu weynaan karaa, markaa waxaan ku talinaynaa shaashadda labaad).
Cabirrada saacaddu waa ku habboon yihiin. Qaar ka mid ah saacadaha tartamaya, sida LG G Watch R, waa kuwo aad u ballaaran oo aan la adkeyn karin. Kuwa kale, sida 'Gear Fit', waxay leeyihiin naqshad ergonomic liidata. Apple waxay qabatay shaqo wanaagsan oo ah qaabeynta Apple Watch-kan oo ay la socoto a jirka oo si raaxo leh ugu habboon curcurka taasna wax dhib ah kuma qabato wakhti kasta.
Hal dhinac oo u baahan in lagu horumariyo waaxdan ayaa ah tayada shaashadda. Macluumaadka way adagtahay in la arko marka iftiinka qoraxda uu toos uga baxayo banaanka.
Mar labaad, Apple wuu ogyahay isku dar qalabka iyo softiweerka si kaamil ah, canaasiirta gacanta ku haysa qalabkan cusub. Dhibaatada weyn ee haysata Android Wear waa, had iyo jeer, kala-jajab, markaa waxaan dooneynaa inaan ogaanno in hagitaanku uusan si fiican ugu soconaynin qaar ka mid ah Motorola ama LG smartwatches, wax aan dhicin, waqti kasta, oo leh nooca ugu horreeya ee Apple Watch firmware . Shaashadda ugu weyn, taas oo dhammaan astaamaha lagu muujiyo, waxaan dib u habayn ugu samayn karnaa sida aan jecel nahay, isla saacaddaas ama ka soo qaadashada barnaamijka asalka ah ee Apple Watch ee iPhone, oo aan ka heli karno macruufka 8.2. In kasta oo astaamahani ay yar yihiin, shaashadda ayaa had iyo jeer ka jawaabeysa taabashadayada iyada oo aan wax qalad ah dhicin.
Sida loogu talagalay «wajiyaal fiirso«Waa hagaag, waa run in xilligan Apple kaliya ay na siiso wax yar oo ka mid ah xulashooyinka asalka ah, iyo in xilligan aysan u furneyn horumariyeyaasha. Si kastaba ha noqotee, "wejiyada" Apple sifiican ayaa loo daryeelaa qaarna waxay leeyihiin daraasiin ikhtiyaarro ah oo noo oggolaanaya inaan ku darno waxyaabo kale oo macluumaad ah shaashadda, sida batteriga haray, cimilada, saacadda saacadda, taariikhda hadda ama wajiga dayax. Mar labaad, Apple waxay mar kale ku sameyneysaa qaab.
Adoo fartaada ka siibinaya shaashadda dusheeda ayaan heli doonnaa ogeysiisyada. Fartaada hoos u siibayso waxaan ka helay «Vistas«, In aan qaabeyn karno oo aan tusno howlaha aan inta badan isticmaalno. Xaaladdeenna waxaan toos u marinnay goobaha saacadaha (si aan u aamusi karno), kormeeraha garaaca wadnaha, saacadda caalamiga ah, batteriga haray, jadwalka iyo cimilada.
La corona waa kaabis ku saabsan marinka laakiin sidoo kale waxay door weyn ka ciyaartaa soo bandhigida meeniska barnaamijka. Qeybtaan waxaan awoodi doonnaa inaan si tartiib tartiib ah ugu rogno Jadwalka, fariimaha ama emaylka, maxaa yeelay mararka qaarkood, markaan farta galino bartanka shaashadda, waxaan horjoogsan doonnaa socodka.
Saacadda ayaa si otomaatig ah loo hawlgeliyaa marka aan curiska jeedinno, si aan u tusno waqtiga ama ogeysiiska ugu dambeeya, nidaam si fiican u shaqeynaya: marka hore dalabka iyo qofka nala soo xiriiray ayaa la muujiyaa, ka dibna farriinta u dhiganta. Xaaladdan oo kale, ayaa Dareeraha dhaqdhaqaaqa Apple Watch Waxay u shaqeysaa sifiican, maxaa yeelay horaantii Samsung Gears, saacadaha sifiican ugama jawaabin qallooca curcurka, wax wali ka dhaca saacadaha kale ee Android Wear. Tizen waxay umuuqataa inay hagaajisay dhibaatadan.
Boggarocessador oo ku dhuunta Apple Watch waa awood: marna dhib kalama kulmin gaabis. Raadintu waa mid hagaagsan, oo aan xatooyo lahayn, oo codsiyada si dhakhso leh ayey u furan yihiin.
Apple Watch igama niyad jabin sida wehelka marka aad jimicsi sameyneyso. Dareeraha garaaca wadnahaaga ayaa had iyo jeer feejignaan leh wuxuuna hayaa taariikh wax weyn ka tari doonta dhanka caafimaadka. Codsiga "Waxqabadka" waa guul dhanka Apple ah. Isku xirnaanshaheeda waa fududahay in la fahmo, taas oo naga caawinaysa inaan helno fikrad dhakhso leh oo ku saabsan sida maalinteennu maanta u eg tahay inay ka dhigto caafimaad.
Codsiga xakameynta jimicsiga waxay kaloo bixisaa macluumaad deg deg ah oo naga caawiya inaan gaarno yoolalka. Barnaamijku wuxuu ina tusayaa garaaca wadnaha, kalooriyada gubatay, masaafada la socda iyo waqtiga oo dhaafay. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in, haddii aad gaarto hadafyadaada, Apple Watch ay ku tusin doonto abaalmarin.
Bixiyaha Apple Watch waa mid aad u fudud in lagu dhejiyo saacadda, iyada oo ay ugu wacan tahay lakabka magnetized. Si kastaba ha noqotee, markii hore waan ka xumaaday inaan arko taas xeedho ma shaqeyn. Waxaan ogaaday in tani ay tahay dhibaato guud oo la xalliyay iyadoo dib loo bilaabo saacadda. Kuma dhicin kiiskeyga. Waxaa igu qasbay inaan saacadda soo celiyo, oo aan ka bilaabo xoqidda, si aan u xaqiijiyo taas, ugu dambeyn, dacwadda ayaa shaqeysay. Waxay umuuqataa in dhibaatadu ay kujirto softiweerka ee aysan ku xirneyn qalabka, mahadsanid.
Apple waxay ku dhawaaqday in Apple Watch uu yeelan doono ismaamul qiyaastii ah 19 saacadood, laakiin runtu waxay tahay, ka dib maalin buuxda oo la isticmaalo, Apple Watch ayaa dhaaftay calaamadaas. Weli, waxaan kugula talineynaa inaad ku dallacdo habeen kasta.
Ma mudan tahay in la iibsado Apple Watch?
Jawaabtu way fududahay: haddii aad jeceshahay saacadaha ama aad rabto qalab wanaagsan oo mas'uul ka ah ilaalinta dhaqdhaqaaqa jirkaaga xakameyntiisa, markaa haa. Haddii kale, kuma talineyno inaad iibsato Apple Watch. Hadda, jiilkii ugu horreeyay ee Apple Watch f- mid kale oo dhammaystir u ah iPhone-keena, xarun wargelin ah (oo waxyar kuu waalan karta haddii aad dhowr alaab oo Apple ah guriga ku haysato) iyo mitir firfircoon oo jimicsi oo wax yar ku soo kordhiya nolosheena maalinlaha ah.
Kaaliyaha codka, Siri, sifiican oo dhakhso ah ayuu u shaqeeyaa, laakiin waa inuu awood u yeeshaa inuu si otomaatig ah u ogaado markii aan joojineyno hadalka inaan fariin toos ah ugu dirno, iyadoo aan loo baahneyn inaan shaashadda ku xaqiijino qasabadaha. Siri waa inuu inbadan inala dhaqmaa on Apple Watch.
Shay kale oo horumar u baahan ayaa ah tayada hadalka: wicitaanada si cad ayaa loo maqlaa, haddii aan ku suganahay jawi aamusnaan buuxda, in kastoo sida caadiga ah, qofka dhinaca kale ka socdaa uu muujiyo inay ku adag tahay inuu si wanaagsan kuu dhageysto.
Inta badan codsiyada xisbiga saddexaad Waxay sidoo kale u shaqeeyaan sidii hal dhammaystir dheeraad ah, iyada oo aan la helin dhiirrigelin inagu hoggaamisa in aan adeegsanno barnaamijka Apple Watch halkii aan ka isticmaali lahayn iPhone-ka, in kasta oo aan rajaynayno in dhinacani is-beddeli doono bilaha soo socda. Dhibic muhiim ah, oo ku qanacsan Apple Watch, ayaa ah, markii ugu horreysay, waxay horeyba u leedahay in ka badan 3.000 oo codsi (waa wax ay tartamayaashu ku eegi doonaan xoogaa xaasidnimo ah).
Sida had iyo jeer, ereyga ugu dambeeya adigaa iska leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch: Falanqaynta iyo Falanqaynta Muuqaalka
Cabirka farta miyaa la beddeli karaa?
Waxay umuuqataa mid aad u weyn waxayna qaadataa wax badan.
Pablo Ortega (@abdihakin_abdi) dijo
Waxaa laga dhigi karaa wax yar ama ka weyn oo geesinimo leh
Jawaab Pablo Ortega (@Paul_Lenk)
Way adag tahay in la sawiro macluumaadka markii qorraxdu si toos ah banaanka ugu dhacdo. Hal su'aal, ma ogtahay haddii dhibaatadaas oo kale ay dhacdo marka shaashadda ay tahay safayr? Taasi waa, haddii aad isticmaasho nooca xiga ee Apple Watch?
Ku jawaab appfan
Waxaan haystaa isboortiga 42mm, waxaan joojiyay saacad xirista sanado badan, inta badan waxaan u isticmaali jiray saacad-joojin markaan jimicsiga sameynayo, horeyba waxaan isugu dayay saacadda qolka jimicsiga, waxayna iga dhigaysaa mid fudud, raaxo badan, ogeysiisyada sidoo fiican, in kasta oo nasiib daro whatsapp marwalba waqti uqaato si uu ula qabsado barnaamijkeeda. Saacaddu si aad u wanaagsan ayey u socotaa, shaqooyin wanaagsan, taasi waa, waxaad ka heli kartaa adeegsi wanaagsan saacadda, hadda waad ogtahay inay tahay saacad shaqooyin dheeri ah leh. marka waxaan kula talinayaa kuwa jecel nidaamka deegaanka tufaaxa oo doonaya inay mid yeeshaan.
Oo miyaad ugu yeedhay dib-u-eegidgan? Iyada oo sawirro laga soo dejiyey Apple? Waxaan sidoo kale ku sameyn karaa sidan oo kale ... waa maxay video karaahiyo ah iyo maqaal
WAESendAny wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fayl kasta ku dirto WhatsApp